Akụkọ - N'afọ gara aga, e zigara 11.0 GWH nke batrị lithium zuru ụwa ọnụ maka ngwaọrụ ike, 80% n'ime ya bụ ụlọ ọrụ ndị China.
N'afọ gara aga, e zigara 11.0 GWH nke batrị lithium zuru ụwa ọnụ maka akụrụngwa ike, 80% n'ime ha bụ ụlọ ọrụ ndị China.
Batrị Lithium enwetala ngbanwe nke batrị nickel cadmium wee banye batrị nickel hydrogen. Site na ọnọdụ nke ahịa ahịa, ọnụahịa ahịa ụwa nke batrị lithium maka ngwaọrụ ike ga-eru 9.310 ijeri afọ na 2019, na ahịa nke lithium batrị maka ngwa ọrụ ike na China ga-eru yuan 7.488 yuan.
N'oge na-adịbeghị anya, evtank, ụlọ ọrụ nyocha, wepụtara akwụkwọ ọcha na mmepe nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ ike China (2020) yana Ivey Economic Research Institute. N'ime akwụkwọ ọcha, evtank mere nyocha na nyocha zuru ezu gbasara mbupu, ogo ahịa, usoro asọmpi nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ ike, ọnọdụ mbupụ nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ eletriki, na ọnọdụ batrị maka ngwa eletriki, wee mee nyocha zuru ezu na nyocha na isi ngwaahịa ụlọ A na-eme nyocha benchmarking nke ụlọ ọrụ ọrụ eletriki.
Dika akwukwo ocha nke ulo oru Ivey Economic Research Institute weputara, site na imeputa ihe ndi ike na-enweghi eriri, onu ogugu nke choro maka otu ngwa oru eletrik na-abawanye, mbupu batrị lithium maka ngwa eletriki na-eto n'ike n'ike. Na 2019, nnyefe batrị lithium zuru ụwa ọnụ nke ngwa ọrụ ike ga-erute 11.0gwh, yana uto kwa afọ nke 25.0%, yana ịchọrọ batrị lithium na ahịa ngwa ọrụ ike China bụ 8.8gwh, yana otu afọ ịrị elu nke 25.7%.
Dabere na akwụkwọ ọcha ahụ, batrị lithium ahụla ahụ nke batrị nickel cadmium na batrị nickel hydrogen. N'ihe banyere ọkwa ahịa, ọnụahịa ahịa ụwa nke batrị lithium maka ngwaọrụ eletriki ga-erute ijeri yuan 9.310 na 2019, na ahịa batrị lithium maka ngwaọrụ eletriki na China ga-erute yuan 7.488.
Wu Hui, onye isi njikwa nke Ngalaba Nyocha nke Ivey Economic Research Institute, kwuru na batrị lithium maka ngwaọrụ ike chọrọ arụmọrụ dị ọnụ, yabụ ọnụ ụzọ ha dị elu karịa batrị ụdị batrị nkịtị. Ruo ogologo oge, Samsung SDI, Panasonic, Murata, LG na ụlọ ọrụ batrị ndị Japan na South Korea ndị ọzọ ka batrị maka ngwaọrụ ike na ụwa. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ndị China dịka Yiwei lithium Energy, Tianpeng, haisida na ụlọ ọrụ ndị ọzọ amalitela ịba ụba ọnụọgụ ahịa nke ụlọ ọrụ batrị batrị na batrị lithium dị elu maka ngwa ọrụ ike n'ụwa na-eji nwayọ nwayọ.
Wu Hui kwuru na ugbu a, isi batrị maka ngwaọrụ eletriki bụ cylindrical 1.5Ah na 2.0ah. Companieslọ ọrụ batrị ndị dị na mba ofesi enyelarịrị batrị ngwa ọrụ 2.5ah n'ọtụtụ buru ibu. Batterylọ ọrụ batrị ndị China dị ka Yihium lithium ume ga-enyekwa batrị 2.5ah na 2020. O kwesịrị ka a rịba ama na ụlọ ọrụ ATL na ụlọ ọrụ batrị ndị ọzọ dị nro na-anwa iji sel ngwugwu ha dị nfe n'ọhịa nke ngwa ọrụ ike.
Na akwụkwọ ọcha na mmepe nke ụlọ ọrụ eletriki eletriki nke China (2020), Ivey Economic Research Institute emeela nyocha zuru ezu na njirimara ndị bụ isi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ngwaọrụ eletriki, ọnụ ọgụgụ mbupu ụwa na ogo ahịa nke ụdị ngwaọrụ eletriki dị iche iche, Uzo di iche iche nke ike nke China na nha ahia, uzo nke ulo oru na ulo oru nke ulo oru eletriki eletriki, na onodu ahia na uzo ahia nke ulo oru eletriki eletriki na mbupu ego na mpaghara, ngwaahịa na onodu ahia nke ngwa oru ike. Ndi oru ulo oru, na onodu ahia nke ndi n’enye ahia batrị nke oma enyochachaala nke oma, ma lebara anya ma leba anya na ngwa oru nke ike n’ile n’aho ise.
Post oge: Sep-11-2020
12v Lithium Ion Batrị na-akwụ ụgwọ, 18650 Nimh, Li Batrị, 12 Volt Rechargeable Lithium Batrị Pack, Batrị Lithium Ion Polymer, 3.7 Batrị na-akwụ ụgwọ, Ngwa niile